Cheer Up Mr LEE 2019 | Movie Review ျမန္မာ စာတန္းထိုး
လီချောဆူဟာ ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်စုံနေပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ ချို့တဲ့မှုတွေရှိနေတယ်…. သာမန်လူတစ်ယောက်လို မတွေးတတ်တဲ့အပြင်တစ်ချို့အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေဟာ ကလေးငယ်တစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတတ်တယ်… ဒီလိုနဲ့ပဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဆင်မပြေမှုများစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းနေပေမယ့် သူ့လို လူအတွက်ဖြစ်နိုင်ဖို့ခဲယဥ်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကြုံလိုက်ရတယ်… အဲ့ဒီက သမီးလေးတစ်ယောက်သူ့မှာရှိခဲ့တဲ့အပြင် အဲ့ဒီသမီးလေးကလည်း သွေးကင်ဆာရောဂါသည်လေး…. ဒီသမီးလေးအတွက်လည်း လက်မခံချင်စရာ အားငယ်ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးပါပဲ… သူ့အဖေက စိတ်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ သူကိုး…. ဒီသမီးလေးက ဆေးရုံမှာ အချိန်ပြည့်နေရပေမယ့် တစ်နေ့ ဘတ်စကတ်ဘော အကျော်အမော်ဆီကလိုချင်လို့ ဆေးရုံက ခိုးထွက်သွားတယ်… အဖေဖြစ်သူ လီချောဆူလည်း မမျှော်လင့်ဘဲပါသွားလေရဲ့… သူတို့ လက်မှတ်ရမလား..လမ်းတစ်လျှောက် သားအဖ ၂ ယောက် ဘယ်လို အလွဲတွေလုပ်ကြမလဲ….သားအဖ ဆက်ဆံရေးမျိုးရော ပိုင်ဆိုင်ပါ့မလား… မာဝမ်ကြီးဆိုပြီး လူသိများတဲ့ မင်းသားကြီး Cha Seung-Won က လီချောဆုအဖြစ်အဓိက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်..ခံစားကြည့်ကြပါဦး.. ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Hay Thar Oo ပဲဖြစ်ပါတယ်….